Jose Mourinho Ma Jeclaysan Doono Hadalkan Cusub Ee Kale Ee Uu Pual Pogba Xaaladiisa Ka Sheegay. - GOOL24.NET
Jose Mourinho Ma Jeclaysan Doono Hadalkan Cusub Ee Kale Ee Uu Pual Pogba Xaaladiisa Ka Sheegay.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Pual Pogba ayaa halkiisa ka sii wada in uu sheego waxyaabo sii hurinaya isla markaana aan farxad galinayn tababaraha uu khilaafka xoogani kala dhexeeyo ee Jose Mourinho.
Pual Pogba oo hore u cadeeyay in laga ganaaxay hadalka saxaafada kadib markii uu muran badan abuuray isla markaana uu sii holciyay khilaafka Mourinho u dhexeeya ayaa hadda haysta fursad uu wax badan kaga hadli karo maadaama oo uu ku maqan yahay waajibaadka xulka qarankiisa France.
Todobaadkan markii uu Pogba la midoobay xulka qarankiisa France waxa uu fariin ku ganay Jose Mourinho isaga oo cadeeyay in imaatinkiisa xulka France ay xataa qiimo wayn u leedahay isla markaana aanu waligii u ciyaarin in uu kabtan noqdo isaga oo tixraacayay xilkii kabtan ku xigeenka ee Mourinho ka qaaday.
Laakiin markale Pogba ayaa hadalo muran dhaliyay sheegay wuxuuna ku dooday in aanu diirada saari karin markale kubbada cagta maadaama oo ay xidigaha soo gaadheen markii ay koobka aduunka ku soo guulaysteen.
Pogba ayaa aaminsan in markii ay koobka aduunka ku soo guulaysteen ay uga dhigan tahay sidii ay soo taabteen xidigaha isla markaana ay adag tahay in uu hadda diirada saaro kubbada gacata wuxuuna wali sii xusuusanayaa farxadii koobka aduunka.
Pogba oo erayadan aanu Mourinho jeclaysan doonin ka hadlaya ayaa yidhi: ” Waa wax adag in diirada la saaro oo markale la bilawdo oo si adag loo garaaco, sababtoo ah waxaanu soo taabanay xidigaha. Anaga ahaan waxay noo ahayd koobkii ugu fiicnaa ee uu aanu ka ciyaartoy ahaan ugu guulaysan karnay”.
Laakiin Pogba ayaa woxogaa hadalkiisa ka soo dabciyay wuxuuna yidhi: “Laakiin sidoo kale waxaanu jecel nahay tartanka, hadaf ayaanu leenahay. Tusaale ahaan, anigu waligay kuman guulaysan Premier league taas ayaa ujeedadayda ah, taas in aan sameeyo ayaan doonayaa”.
Pual Pogba ayaa kadib guuldaradii Brighton waxa uu saxaafada ka hor sheegay in isaga iyo ciyaartoyda kooxdiisa United ayna maskax ahaan ula mid ahayn kooxdii ay guuldarada kala kulmeen ee Brighton oo uu sheegay in ay guusha doonaysay in iyaga ka badan taas oo ka mid ahayd waxyaabihii khilaafka Mourinho sii kordhiyay.
Pual Pogba ayaa udub dhexaad u ahaa soo laabashadii cajiibka ahayd ee ay Manchester United ka samaysay kulankii ugu danbeeyay ee Newcastle United ay labada gool kaga hormartay isaga oo wali ah xidiga ugu saamaynta badan Man United inkasta oo uu haddana eedayn badan la kulmayo.